I-HPC199 AI Ikhawuntara yezithuthiukubala kwezithuthi okubala izithuthi ezingenayo neziphumayo. Ingasetyenziselwa ukubala ezinye izinto okanye isetyenziselwe ukubala kwabantu. Uninzi lwethuIkhawuntara yezithuthi Iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi. Ukuthintela ukukopa, khange sibeke umxholo omninzi kwiwebhusayithi. Ungaqhagamshelana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze bakuthumele ulwazi oluthe kratya malunga nathiIkhawuntara yezithuthi.
I-HPC199 AI Ikhawuntara yezithuthi ine-chip ye-AI eyakhelweyo ngaphakathi, enokuzimela ngokuzimeleyo ekujongeni umkhondo wokujolisa, ukubala ukubonwa, kunye nolawulo. Ingasetyenziselwa ulawulo lokuchasana nomsila, ukubala kwezithuthi, ulawulo lokuxinana, ulawulo lwendawo kunye nezinye iimeko. Inokudityaniswa kunye nerekhodi ye-DVR yediski erekhodayo yokubonelela ngevidiyo yokucacisa okuphezulu Imveliso emininzi yokubala kunye nemisebenzi emininzi yokubala ngomsebenzi wokujonga, i-HPC199 AIIkhawuntara yezithuthi inokusetyenziswa kwi-Intanethi okanye kwindawo ezimeleyo, kwaye ikwanokubonelela ngezisombululo zolawulo lokhuseleko kwezorhwebo, ukuthengisa, iipaki, iibhanki, ukuthuthwa kwendlela kunye namanye amashishini.
I-HPC199 AI Ikhawuntara yezithuthi idibanisa umsebenzi wezibalo zendlela, ongachaphazelekiyo ngumbono obonakalayo.
Indawo ephezulu yokujonga inokufikelela kwiimitha ezingama-20. Ingalandela iithagethi ezingama-50 ngaxeshanye.
Ukubalwa kwezithuthi kuqhutywa ngokommandla owenziwe ngokwezifiso kunye nolwalathiso lokubala ekujoliswe kulo.
Inye kuphela i-HPC199 ikhawuntara yezithuthi Ungaqonda amanani ahlukeneyo ezithuthi ezingenayo neziphumayo.
I-HPC199 AI Ikhawuntara yezithuthiyamkela uyilo lwamanzi olungena-IP65, olunokwenza ukubala kwezithuthi ngokuchaneka okufanayo naxa kusetyenziswa ngaphandle. I-HPC199 AI Veikhawuntari yehicle ixhasa ukufakwa nakweyiphi na i-engile, kwaye amathuba okuchaphazeleka phantsi kwelayithi, ukukhanya kwelanga okanye ukukhanya kwelanga kuphantsi kakhulu. Inokucoca ngokuzenzekelayo ifuthe lezithunzi ekujoliswe kuzo. Isebenzisa isivamvo somfanekiso o-ethe-ethe nkqu nasebusuku ngokukhanya okuphakathi kwendawo okubuthathaka. Iinkcukacha manani eziqhelekileyo zokubala izithuthi. Xa iHPC199 AIIkhawuntara yezithuthi ayinakuchonga ngokuchanekileyo ithagethi kwi-engile ethile, ukufunda okujolisiweyo kunye noqeqesho kunokusetyenziselwa ukwandisa isampulu ekujoliswe kuyo ukuphucula inqanaba lokwamkelwa.
Umsebenzi wokubala izithuthi we-HPC199
1. Ulawulo lomsebenzisi womnatha, ungqamaniso lwexesha lenethiwekhi, ukuxhasa ukubeka esweni okwenyani okwenyani.
2. Inkxaso yokuncitshiswa kwengxolo yedijithali ye-3D, umfanekiso ucacile kwaye ubushelelezi.
3. 1 RJ45 ujongano, 1 DC12V ujongano, 1 unxibelelwano olunzima, 1 RS485 ujongano.
4. Inkqubo ye-ONVIF yenkxaso, umgaqo-nkqubo kazwelonke we-G28181 protocol.
5. Inkxaso yokufumanisa ukuhamba kwabahambi, ukufunyanwa kokuhamba kwesithuthi, ukulawulwa kwendawo yenkxaso, ukuhamba kwabakhweli kunye nokuhamba kokuhamba kwesithuthi okuxubileyo.
6. Ukuxhasa umsebenzi wokuqalisa kwakhona ngokuzenzekelayo emva kokuhluleka kwamandla / ukungaphumeleli okungalindelekanga.
7. Inkxaso yomlingiswa oxhasayo, indawo yokuma kwindawo ehlengahlengiswayo kunye nombala ojikajika ngokuzenzekelayo.
8. Uyilo lwebanga lezemveliso, ulwakhiwo olulula, ukuchaneka okuphezulu kunye nozinzo olomeleleyo.
9. Inkxaso yokutshintsha okuzenzekelayo kweefilitha ukuqonda ukongamela imini nobusuku, inkxaso yokujonga eselfowuni; Ukunikezelwa kwamandla e-Poe (ngokuzithandela).
10. Inkxaso yokuchongwa kwescreen / ukubonwa kwescreen, iindawo zokuchonga ezi-4 kunye neendawo ezi-4 zokuvalelwa zinokusetwa.
11. Umsebenzisi unokukhetha umsinga wekhowudi kwaye ahlengahlengise inqanaba lesakhelo, isisombululo, kunye nomgangatho wevidiyo.
Imowudi yonikezelo lwamandla
Isixhobo samandla se-DC12V
I-Binuclear ARM cortex A53 1.5GHz 32KBI-cache
SONY IMX, 1 / 1.8 "Inkqubela phambili yovavanyo lweCMOS
0.1 Lux (Indawo yokukhanya kwesitalato ebusuku)
10-30 isakhelo / yesibini
Umjelo ophambili 3840 × 2160 Umsinga osezantsi 1280 × 720
I-Onvif / http / modbus / RS485
Udidi lophawu lwezithuthi
Ibhasi / ilori / imoto / isithuthuthu (iitrayisikile) / ibhayisekile
Ulawulo lwesoftware yeWebhu
Izibuko lenethiwekhi, izibuko ezingama-485
Ubukhulu: 185mm * 85mm * 90mm
I-HPC199 AI yevidiyo yeemoto zokubala ukubala
Sineentlobo ezininzi ze-IR Ikhawuntara yezithuthi, 2D, 3D, AI Ikhawuntara yezithuthi, kuhlala kukho enye eya kukufanela, nceda unxibelelane nathi, siya kuncoma eyona ilungileyo Ikhawuntara yezithuthi yeyakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Egqithileyo MRB AI isihlwele esiphikisayo HPC198
Okulandelayo: Ikhamera yokubala intloko ye-MRB HPC010